यी हुन विश्वकै का मु क महिला राजनितिज्ञ, जसको बारेमा थाहापाउनुभयो भने उड्नेछ तपाईको होस् ! « गोर्खाली खबर डटकम
यी हुन विश्वकै का मु क महिला राजनितिज्ञ, जसको बारेमा थाहापाउनुभयो भने उड्नेछ तपाईको होस् !
काठमाडौँ । महिलाहरु राजनितिमा अगाडी आउनु एक संवेदनशील विषय हो । यद्यपी वर्तमान समयमा विश्वमा महिलाहरु जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अब्बल रहका छन् । चाहे त्यो जमिनको संसद होस वा अन्तरिक्षको । विश्वको जुन सुकै क्षेमा पनि महिलाहरको समहभागीता समान रहेको छ । त्यसैले आज हामी यहाँ विश्वका केही राजनितिज्ञ महिलाहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
२.जुलिया बोंक : १८ वर्षको उमेर देखि नै राजनितिमा सक्रिय रहेकी जुलियाले सन् २००४ मा जर्मनको राजनितिक इतिहासमा हात हालेकी हुन् । उनी १४ वर्षको उमेरमा नै ड्रेस्डेन शहरको विद्यार्थी संघको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
३.मिकेला विटोरिया बरमबिल्ला ः उनी इटालीको राजनितिमा एक चर्चित हुनु ।बाल्यकालदेखि नै राजनितिमा रुचि राख्ने चाहना नै राजनितिज्ञ बन्ने थियो । सन् २००८ मा मिकेला इटालियन क्याबिनेटमा सहभागी भइन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री बनिन् ।